कसरी हुदै बैशाख ३१ को निर्बाचन ? – Himal FM 90.2 MHz
कसरी हुदै बैशाख ३१ को निर्बाचन ?
स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणका लागि आज बिना अबरोध पुरै उत्साहका साथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज १० बजेदेखि ५ बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकेको थियो ।
देशभरका कूल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ ।
बाँकी ४ प्रदेशमा स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा अर्थात् आगामी जेठ ३१ गते निर्वाचन हुने छ । दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गतेबाट चुनावी कार्यक्रम तोकिएको छ । दोस्रो चरणमा मधे दुई दुई प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुमसहित ४३ जिल्लामा निर्वाचन हुने छ । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवनमा मात्र पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा–लेखनाथ र भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुँदैछ । अन्य ९३ नगरपालिकामा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा ७ हजार मतदान केन्द्रमा मतदान हुने जनाएको छ । देशभर १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै, १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये ५० लाखले पहिलो चरणमा मतदान गर्ने छन् ।
उम्मेदवारी दर्ताको समय सकिएलगत्तै उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गरिने छ । दर्ता भएका उम्मेदवारकाबारे कुनै गुनासो भए भोलि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ । भोलि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयनपत्र जाँच गर्ने कार्य तालिका छ ।
यस्तै बिहीबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नेछ । नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म नाम फिर्ता गर्न सक्नेछन् ।
यही वैशाख ३१ गते हुने चुनावका लागि २२ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।